Otú nyefee faịlụ site na Samsung Kies
Olee otú Jiri Samsung Kies nyefee, na nkwado ma weghachite
Ugbu a, ị ga-esi gị na-egbuke egbuke Samsung Galaxy S4, na ike na-eche na nyefee faịlụ site na kọmputa na ya? Ebe a bụ ihe dị mfe na free ụzọ aka ime ya, bu, na iji Samsung Kies maka kọmputa ma ọ bụ Samsung Kies Air. Na ihe ọ bụla n'ime ha, i nwere ike nyefee kọntaktị, foto, video, music na ndị ọzọ na site na gị Samsung ekwentị mfe. Na-esonụ akụkụ, ga-amasị m na-egosi gị otú iji Samsung Kies (Ebe a, m na-Windows version dị ka ihe atụ.) Ma ọ bụ Samsung Kies ikuku nyefee faịlụ n'etiti gị Samsung ekwentị na kọmputa.
Part 1. Olee nyefee faịlụ na Samsung Kies maka kọmputa
Part 2. Olee nyefee faịlụ na Samsung Kies ikuku
Part 3. Alternative ka Samsung Kies / Kies ikuku
Part 1. Olee nyefee faịlụ site na Samsung Kies maka kọmputa
2: nkwado ma weghachite
3: mmekọrịta Samsung ekwentị
1. Olee mbubata na mbupụ faịlụ ka / si Samsung ekwentị
Dị ka gị Samsung ekwentị nlereanya, ị nwere ike ibudata Samsung Kies ma ọ bụ Kies 3 na wụnye na gị PC. Agba ya na jikọọ na gị Samsung ekwentị na PC site na eriri USB ma ọ bụ WiFi. Mgbe ọma ghọtara, gị Samsung ekwentị ga-gosiri na interface ya faịlụ categorized on ekpe kọlụm.
Pịa Ndi ana-akpo, Music, Photos, Videos na Podcast iche iche, na kwekọrọ ekwekọ windows egosipụta na nri panel. Mgbe ahụ, ị nwere ike bubata kọntaktị, music, video, foto na Podcast gị Samsung ekwentị, na Anglịkan.
2. Olee otú nkwado ndabere na mpaghara niile data ma weghachi e mesịrị
Ichekwa ndabere data on Samsung ekwentị bụ nnọọ mkpa. Mgbe na ezuru ekwentị gị ma ọ bụ agbajikwa ma ọ bụ mgbe ị na-ata ahụhụ dị ukwuu data ọnwụ, i nwere ike iji nkwado ndabere na mpaghara faịlụ na-data azụ. Samsung Kies Akwadoo elu kọntaktị, S Planner, ozi, music, video, photos, memo, oku na ndekọ, Mmasị email ndekọ PC mfe.
Nzọụkwụ 1. Launch Samsung Kies on PC na jikọọ na gị Samsung ekwentị na PC site eriri USB. Gị Samsung ekwentị ga-ngwa ngwa achọpụtara.
Nzọụkwụ 2. Gaa ndabere / Weghachi na tinye akara data ị chọrọ ndabere. I nwekwara ike nne Mmetụta akpaghị aka ndabere mgbe USB-ehiwe njikọ.
Nzọụkwụ 3. Click ndabere. Ke ofụri ndabere usoro, ị kwesịrị ijide n'aka gị Samsung ekwentị na-mgbe ejikọrọ.
Nzọụkwụ 4. Pịa ndabere / Weghachi> Weghachi Data. Tinye akà rà Họrọ nchekwa ịchọta ndabere faịlụ i mere. Mgbe ahụ, họrọ gị chọrọ ihe na pịa Weghachi.
3. Olee otú ka mmekọrịta Samsung Kies na Samsung ekwentị
Samsung Kies-enye gị ohere ka mmekọrịta kọntaktị na Google, Outlook, wdg, mmekọrịta oge na memo na Outlook, na mmekọrịta music, video, photos, Podcast na akwụkwọ ndị Samsung ekwentị mfe.
Dị pịa mmekọrịta ịbanye mmekọrịta window. Tinye akà rà ihe ọ bụla ị chọrọ ka mmekọrịta gị Samsung ekwentị. Mgbe ahụ, pịa mmekọrịta. Cheta bụghị ịkwụpụ gị Samsung ekwentị n'oge usoro.
Part 2: Olee otú nyefee faịlụ site na iji Samsung Kies ikuku
Samsung Kies ikuku na-enye gị ike jikwaa data na gị Samsung ekwentị site Nchọgharị. Na ya, i nwere ike nyefee music, foto, na kọntaktị na kalenda n'etiti gị Samsung ekwentị na kọmputa effortlessly. Ọzọkwa, ị nwere ike izipu ma zaghachi ozi ederede site na kọmputa ozugbo.
Soro mfe nzọụkwụ on otú iji ya.
Nzọụkwụ 1. On gị Samsung ekwentị, gbanye a WiFi netwọk. The WiFi netwọk ga-abụ otu dị ka onye na-eji na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2. Open Samsung Kies ikuku na enweta Malite. Mgbe ọ ọma jikọọ kọmputa gị, ọ ga-egosi gị ihe URL. Nzọụkwụ 3. Tinye URL dị na nchọgharị. Na gị Samsung ekwentị, pịa Kwe Ka-ekwe ka gị na kọmputa na-jikwaa gị Samsung ekwentị. Nzọụkwụ 4. Ugbu a, data na gị Samsung ekwentị na-egosipụta na peeji nke. Tinye akà rà ọ bụla Atiya na bulite / download / ihichapụ ihe na ya.
Part 3. A Ike Alternative ka Samsung Kies / Kies ikuku
-Esi ike gwụrụ nke Samsung Kies ma ọ bụ Kies ikuku, na anya n'ihi na onye ọzọ? E nwere ọtụtụ uzo ozo, otu nke Wondershare MobileGo guzo. Ọ bụ ihe niile-na-otu Android njikwa, ọ pụrụ ime ihe Samsung Kies dara mkpụmkpụ.
Enweta ihe Samsung Kies / Kies ikuku uzo ozo ebe a >>
Mma 1. nkwado ma weghachite na 1 Pịa. Na MobileGo, ị nwere ike ndabere kọntaktị, ozi, kalenda, oku na ndekọ na ngwa site Samsung ekwentị na PC / Mac na weghachite na 1 Pịa. (The windows version nwekwara nkwado ndabere na mpaghara weghachite music, video na foto.)
Njirimara 2. Nyefee ngwa, usoro mgbasa ozi / si Samsung. Ọ na-ahapụ gị mfe ịdọrọ na dobe photos, kọntaktị, ngwa, video, music na ndị ọzọ n'etiti Samsung ekwentị na PC. The Windows version ọbụna na-enyere iji tọghata music na video.
Njirimara 3. mmekọrịta kọntaktị na Outlook, Windows Live Mail, wdg The Windows version ike gị ka mmekọrịta kọntaktị na Outlook Express, Windows Live Mail, Windows Akwụkwọ Adreèsị na Outlook 2003/2007/2010/2013 enweghị a ikedo.
Njirimara 4. Nyefee music si iTunes ka Samsung ekwentị. MobileGo-enyere gị aka nyefee listi ọkpụkpọ na iTunes Library gị Samsung ekwentị conveniently. E wezụga na, na ị na-enwe ike mbupụ listi ọkpụkpọ site na a Samsung ekwentị na iTunes Library kwa.
Olee otú iji wụnye, uninstall, imelite Samsung kies?
Olee otú ndabere Samsung Galaxy S4 na 1 Pịa?
Olee otú ndabere & Weghachi Samsung Galaxy S3?
Olee otú ndabere Samsung Galaxy Cheta 3?
Olee otú ndabere Samsung Galaxy Cheta?
Olee otú Gbanwee Data si Samsung ka iPhone?
Otú nyefee ọdịnaya site iPhone ka Samsung?
Olee otú Detuo faịlụ site Nokia ka Samsung?
3 Ụzọ ka jikota kọntaktsị na Samsung / Android ekwentị mkpanaaka na
Olee otú Wụnye Android Lollipop on igwe na mbadamba
Olee otú ndabere Samsung Galaxy Cheta 3
> Resource> Android> Olee otú Jiri Samsung Kies nyefee Files